FBE အစည်းအဝေးအပေါ်သုံးသပ်ချက် – ဦးဖိုးသာအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » FBE အစည်းအဝေးအပေါ်သုံးသပ်ချက် – ဦးဖိုးသာအောင်
FBE အစည်းအဝေးအပေါ်သုံးသပ်ချက် – ဦးဖိုးသာအောင်
Posted by kai on Jan 23, 2011 in Politics, Issues, Think Tank |7comments
(၁၅) ကြိမ်မြောက် FBE ခေါ် (ဥရောပရောက်မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးပွဲ) အစည်းအဝေးအပေါ် သုံးသပ်ချက်
Forum of Burmese in Europe (FBE) ၎င်းစာကြောင်းထဲမှ Forum ကို မြန်မာလိုရှာကြည့်လိုက်တော့ အများစုပေါင်းဆွေးနွေးတင်ပြရာနေရာလို့ အဓိပ္ပါယ်ထွက်ပါတယ်၊
ပြည်သူ့ဟစ်တိုင်လို့ခေါ်ရင်လည်းရတဲ့အကြောင်း အင်္ဂလိပ် မြန်မာအဘိဓါန်မှာဖေါ်ပြထားပါတယ်၊
ဒါကြောင့် အက်(ဖ်)ဘီအီးကို မြန်မာလိုပြောရလျှင် ဥရောပမှ မြန်မာများ၏ စုပေါင်းဆွေးနွေးတင်ပြကြတဲ့နေရာပါပဲ။
ယနေ့ခေတ်မြန်မာ့အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးလောကမှာလည်း တယောက်ထက်ပိုသော အလုပ်တို့ အဖွဲ့တို့ဆိုလျှင် ဗဟုဝုစ်ကိန်းအများထဲကို ထည့်သွင်းပြီး ”များ“ ဆိုတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပုဒ်ထည့်ကာ သုံးနှုံးကြေငြာတာ ဓလေ့တခုလိုဖြစ်နေပါတယ်၊
ထိုနည်းတူ နှစ်ယောက်တဖွဲ့ သုံးယောက်နဲ့တဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး ကျောင်းသားအဖွဲ့ ရှစ်ဖွဲ့တို့ ဘုန်းကြီး အဖွဲ့ခြောက်ဖွဲ့ စသည်ဖြင့် ဗဟုဝုစ်အဖြစ် ကြေငြာတာလည်း လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နိုင်ငံရေး ကွက်ရိုးလေး တခု ဖြစ်နေပါပြီ။။
အက်(ဖ်)ဘီအီးကလည်း အဖွဲ့လို့ယူဆမယ်ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်၊ ဆယ့်ငါးကြိမ်မြောက် ဆွီဒင်ဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်းအရ ဥရောပနိုင်ငံများမှ အလုပ်အဖွဲ့ဝင် ၁၈ ဦး ပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်၊
မှတ်တမ်းဆုံးဖြတ်ချက် (၁၄) မှာ အချက်အလက်အမှတ် ၄.၅.၆ ကိုအကောင်အထည်ဖေါ်နှိုင်ရန် ကိုအောင်ထူး၊ ကိုနွယ်အောင်၊ ကိုဝင်းနိုင်၊ ကိုကျော်သွင်တို့လေးဦးကို အက်(ဖ်)ဘီအီး မစ်ရှင်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန် တာဝန်ပေးအပ်ကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်၊
ဒါကြောင့် ဒီလေးဦးကို အက်(ဖ်)ဘီအီး ခေါင်းဆောင်ကြီးများဟု ယူဆနှိုင်ပါတယ်၊
အက်(ဖ်)ဘီအီး ဖွဲ့စည်းပုံက တော်တော်လေးသဘောကျစရာ ကောင်းလှပါတယ်၊
အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံတို့အဖွဲ့ခွဲများရဲ့ တာဝန်ခံတို့ ဆိုတဲ့ နေရာနဲ့ တာဝန်ခံမှု့ကို ဖျောက်ထားပြီး အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး တာဝန်ခံများဖြစ်သည်ဆိုတဲ့ အချိုးမျိုးနဲ့ ဖွဲ့ထားတာ တွေ့ရပါတယ်၊
အလုပ်အဖွဲ့မှ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မည် ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲ လှုပ်ရှားနေကြတာ တွေ့ရတော့ ပြုံးချင်စရာပါ။
အင်တာနက်ခေတ်ကိုရောက်လာလို့ ပြည်ပရောက်တွေ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ကြတာ မော်ဒယ်ပုံစံဖြစ်လာတာ တွေ့ရပါတယ်၊
ပြည်ပက ထောက်ပံ့ကြေး ပရီပိုဇယ်နဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ အဖွဲ့တွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရတဲ့ မော်ဒယ်ပုံစံပါ၊ သိပ်လန်းပါတယ်၊
အချို့အဖွဲ့က အတွင်းရေးမှုးကြီး ခေါင်းဆောင်ပါတယ်၊ ဥက္ကဌ မထားတဲ့အဖွဲ့လည်းရှိတယ် ထားတဲ့အဖွဲ့လည်း ရှိပါတယ်၊
အဖွဲ့ဝင်များထဲမှာ ငွေထိမ်း၊ စာရင်းစစ်ဆိုတာ ရုပ်ပြထားတာလည်းရှိတယ်၊ မထားတာလည်း ရှိတယ်၊ သက်တမ်းဆိုတာမရှိဘူး၊
ပရီပိုဇယ်ပေးတဲ့ တာဝန်ခံကောင်နဲ့ ယူတဲ့တာဝန်ခံကောင် သူတို့ နှစ်ယောက်ကျေနပ်ရင်ပြီးတယ်၊
ပရီပိုဇယ်ပေးတဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ ကျေနပ်မှု့ရအောင် ရသုံးငွေစာရင်းကို တကယ့် ပီကိုလာ စာရင်းပြုပညာရှင်တွေက ရေးဆွဲတယ်၊ ရသုံးငွေစာရင်းကို နှစ်စဉ် နှစ်မျိုးရေးဆွဲကြတယ်၊
တမျိုးက ထောက်ပံ့ကြေးပေးတဲ့အဖွဲ့ကိုတင်ပြဖို့နဲ့ တမျိုးက မိမိတို့အဖွဲ့ထဲက နလဗိန်းတုံးတွေကို ချပြဖို့ဖြစ်တယ်၊
နယ်စပ်မှာကြတော့ ဟိုပြောဒီပြော ပူညံပူညံလုပ်မယ့်ကောင်ဆိုရင် ကေအင်ယူကို လက်တို့မယ်ဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု့ရှိတယ်၊
ကေအင်ယူကို မလုပ်တစုတွင်မက မလုပ်နှစ်စု၊ သုံးစုပေးရလို့ ခြူသံပါအောင် ညည်းတဲ့အသံတွေလည်းကြားရတယ်၊
ပေးတယ် ယူတယ်ဆိုတာလည်း သက်သေရှိတဲ့အလုပ်မှမဟုတ်တာ ငွေကိုင်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့စကားပါပဲ။ ။
ပြည်ပရောက်တွေမှာ ဘာအဖွဲ့ပဲဖွဲ့ဖွဲ့ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှုဆိုတာရှိစရာမလိုဘူး၊
ငွေပေးမယ့် အင်ဂျီအိုတွေနဲ့ ပြေလည်ဖို့ပဲလိုတယ်၊
သူများပေးစာကမ်းစာကို အဝေမသင့်လို့ ပုလင်းနဲ့ ပေါက်ခွက်နဲ့ ပေါက်ကြလို့ ထိပ်ပေါက်ခေါင်းကွဲ ဖြစ်ကြရတဲ့ အစည်းအဝေး တွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်၊
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ထာဝရ ဥက္ကဌ၊ ထာဝရအတွင်းရေးမှုး၊ ထာဝရခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ မော်ဒယ်ပုံစံသစ်ဟာ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်လောက်အသားကျလာပြီမှို့ ရိုးသွားကြပါပြီ၊
ဘယ်သူတွေက ဘာမှလည်း မပြောကြတော့ပါ၊ မှိန်းစား ဘိန်းစားသေသောက်ကျူးများနဲ့ နောက်လိုက် ရန်ရှောင်များက တကယ့်အများစုကြီးပါပဲ။
ဒီအထဲမှာ အက်(ဖ်)ဘီအီးကလည်း လိတ်တက်(စ်)်ပုံစံတမျိုးးပါ၊ အလုပ်အဖွဲ့လို့ဆိုပြီး ၎င်းအဖွဲ့က တာဝန်ပေးသူလေးဦးက တချို့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရမယ်တဲ့၊ ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ”အလုပ်အဖွဲ့မှ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မည်“ ဆိုတဲ့ စာတမ်းလေးတကြောင်းနဲ့ပဲ ပတ်တောပိတ်ထားတယ်၊
အက်(ဖ်) ဘီအီးက လည်း နိုင်ငံပေါင်း ဆယ်နိုင်ငံမှ ဥရောပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုတယ် လူဦးရေကတော့ အားလုံးပေါင်းမှ ဆယ်ရှစ်ဦး အလုပ်အဖွဲ့လို့ဖေါ်ပြထားတယ်။
အဲဒီ့အလုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်း သူတို့ကိုယ်စားပြုတဲ့ နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ကိုယ်စားပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူး၊
ဘယ်သူမှလည်း ကိုယ်စားပြုမခံဘူး၊ ဒီကြားထဲမှာ ထိုင်းနယ်စပ်မှာနေတဲ့ အောင်ထူးကိုပါ ဆရာခေါင်းဆောင်လုပ်ထားလိုက်သေးတယ်၊
အောင်ထူးကလည်း ဥပဒေကြောင်းရေးပြီး ပရီပိုဇယ်တင်တဲ့နေရာမှာ နာမည်ကြီးတယ်၊ အဖြူတွေ ယုံတာမယုံတာထား ဘောင်ဝင်အောင်ရေးနှိုင်တယ်၊
ဖယ်ဒရယ်ဥပဒေကြီးကို ရေးသားပြုစုဖို့ ငွေတောင်းတာ အများကြီးရတယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်း အချင်းချင်းတွေကွဲကြပြဲကြလို့ ဖယ်ဒရယ် ဖွဲ့စည်းပုံကြီးအချော မသတ်နိုင်ကြဘူး၊
ဒါ ပြည်ပရောက်အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ ပုံစံထဲက တစိတ်တဒေသပါ။
အင်အယ်ဒီကို ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ထင်ပြီး၊ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး အတွက် အသုံးပြု ရန်တောင်းထားတဲ့ ငွေဟာ မနည်းဘူးလို့ကြားရတယ်၊
အင်အယ်ဒီက ရွေးကောက်ပွဲလည်းမဝင်ရော အဲဒီ့ငွေတွေလည်း သူတို့ အိတ်ထဲကို ရောက်သွားကြတယ် ဆိုတာတွေလည်း ကြားခဲ့ရတယ်။
အက်(ဖ)ဘီအီးရဲ့ မနှစ်က ဆွီဒင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြည့်ကြရအောင်၊
နံပါတ်တစ်၊ — ၊
၂၀၀၈ တရားမဝင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥဒေကို အခြေခံ၍ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ၂၀၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဆန့်ကျင်လုပ်ဆောင်သွားရန်….. တဲ့။
ကဲ အခုပွဲလည်း ပြီးသွားပြီ၊ လွတ်တော်တောင် ခေါ်တော့မယ်၊ အက်(ဖ)ဘီအီးက ဘာတွေလုပ်လိုက်လို့ စစ်အစိုးရမှာ ဘာတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါသလဲ၊
အရှက်မရှိ ရှုတ်ချ၊ ကန့်ကွက်၊ စာတင် ဆိုတာလောက်နဲ့ ပြည်သူကို လိမ်ညာလို့ရတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူး၊ ဟိုမှာ စင်ပေါ်ရောက်သွားပြီ။
နံပါတ် နှစ်၊ —
၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ အားနည်းချက်များ၊ နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်နေသည့် အချက်များကို အခြေခံ၍ ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ပျက်ပြယ် ကြောင်း (Null and Void) ကြေငြာနိုင်ရေးအတွက်
(က) ကုလအထွေထွေညီလာခံနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် Lobby လုပ်ငန်းများ
(ဂ) လူထုပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတကာရှိ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများနှင့်အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားရန် ဆုံးဖြတ်သည်၊ …. တဲ့။
ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်က အရေမရ အဖတ်မရနဲ့ ဘော ဖြစ်သွားပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် နှစ်ကိုလည်း ကြည့်လိုက်ပါအုံး၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ကုလ လုံခြုံရေးကောင်စီက ပျက်ပြယ်ကြောင်း ကြေငြာနိုင်ရေး လုပ်ကြအုံးမယ်တဲ့၊
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုတာ မတရားဘူး၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မညီဘူးဆိုတာ တကမ္ဘာလုံးသိတယ်၊
သိသိကြီးနဲ့ပဲ ဘယ်နိုင်ငံကမှ မကန့်ကွက်ဘူး၊ အဓိကကျတဲ့ အမေရိကန်ကတောင် မကန့်ကွက်ဘဲနောက်တက်အစိုးရနဲ့ ဆက်ဆံမယ်လို့ ပြောနေတယ်၊
တရုတ်၊ ကုလား၊ အာစီယံတို့က ထောက်ခံလိုက်ကြသေးတယ်၊
ဒါလောက်ကို တောင် မသိကျိုးကျွံပြုပြီး ကုလသမဂ္ဂမှာ လော်ဘီလုပ်အုံးမယ်ဆိုပါလား၊
ပရီပိုဇယ်လုပ်စား နိုင်ငံရေးအရေခြုံတွေအတွက် ငွေရဖို့ နိုင်ငံရေးကွက်တွေထွင် နိုင်ကြပေမယ့် မျှော်လင့်ချက် အမှားတွေ အပေးခံရပေါင်းများလွန်းလို့ အသက်ငင် နေရပြီဖြစ်တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ မျက်နှာကိုတော့ နည်းနည်းလောက် ထောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
အာမခံတာဝန်ယူမှု ၂ဝ ရာနှုန်းလောက် မှမရှိတဲ့ စကားတွေကို ပြောနေကြတာလည်း ရပ်တန်းကရပ်ဖို့ကောင်းပါပြီ၊
စစ်အစိုးရအားလည်းကောင်း၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို မူတည်၍ ပေါ်ပေါက်လာမည့် အစိုးရသစ်အားလည်းကောင်း “ ယှဉ်ပြိုင်စိန်ခေါ်နိုင်သော အစိုးရ အင်္ဂါရပ်များနှင့် ပြည်စုံ သည့် ယှဉ်ပြိုင်အစိုးရတရပ်ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် သဘောတူကြောင်းနှင့် ပြည်ပရောက် မြန်မာပြည်သားများနှင့် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများမှ ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင် ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်…… တဲ့။
ဒါဆိုရင် ဆုံးဖြတ်ချက် နံပါတ် တစ်ကို ဖြစ်မလာနိုင်မှန်းသိလျှက်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို အက်(ဖ)ဘီအီးတို့ မတိုက်ဖျက်နိုင်မှန်းသိလျှက်နဲ့ အိရောင်ဝါး ဆုံးဖြတ်ချက် တခုရေးပြီး ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ တက်လာမယ့် အစိုးရကို ယှဉ်ပြိုင်အစိုးရ တခုထပ်ဖွဲ့မှာကို သဘောတူတယ်၊
အားလုံးပူးပေါင်းဖို့ တိုက်တွန်းတယ်လို့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် ရှေ့နောက် အမြီးအမောက်တည့်ဖို့လောက် စဉ်းစားဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဒါက အရေးမကြီးသေးပါဘူး၊ စစ်ဦးစီးအစိုရသစ်ကို ယှဉ်ပြိုင်အစိုးရတခုဖွဲ့ဖို့ဆိုတော့ လက်ရှိဦးစိန်ဝင်းကြီး အစိုးရကို အသိအမှတ်မပြုတော့ဘူးလား၊
ဒီမေးခွန်းကို အက်(ဖ)ဘီအီးရဲ့ တာဝန်ခံတို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ဖြေဖို့လိုပါတယ်။
အင်စီဂျီယူးဘီကို လက်မခံတော့ဘူးဆိုရင် နောက်အစိုးရသစ်တရပ်ဖွဲ့ရန် သဘောတူတယ်ဆိုတဲ့ ပြတ်သားတဲ့ စကားမျိုး ပြောရပါလိမ့်မယ်၊
အင်း… အဲ … အင်စီဂျီယူးဘီလဲ ရှိနေပါစေ၊ နောက်ထပ်လည်း ယှဉ်ပြိုင်အစိုးရတခု လိုပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးလောကမှာ သိပ်ပြီးအရာ မဝင်နိမ့်ကျ လွန်းတဲ့ စကားမျိုးတွေ တော့ မပြောသင့်ပါဘူး၊
သိက္ခာနဲ့ သမာဓိကို တန်ဖိုးထားသူတိုင်း၊ မျိုးရိုးနဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ သီလဂုဏ်ရှိသူတိုင်း မှန်ကန်ထိုက်တန် ပြတ်သားပြီး ပြည်သူအကျိုးရှိမယ့် စကားမျိုးကိုသာ ပြောသင့်ပါတယ်။
ပြည်ပမှာ ကိုမောင်မောင်ဝန်ကြီးချုပ်လုပ်မယ်၊ အစိုးရသစ်တရပ်ဖွဲ့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလည်းကြားခဲ့မိပါတယ်၊
နောက် ဗ.က.ပ ဖိုးသံချောင်းအဆိုပြုပြီး အင်စီယူဘီ ကိုမြင့်သိမ်းတို့ ကြေငြာထားတဲ့ အစိုးရသစ်ဖွဲ့မယ်ဆိုတာလည်း ကြားရပြန်ပါသေးတယ်၊
သူတို့ပြောတာတွေကို ဟုတ်တာ၊ မဟုတ်တာ ဖြစ်တာ၊ မဖြစ်တာ ထားလို့ ရေဒီယိုကလည်း လိုက်ပြီးကြေငြာပေးနေကြပါတယ်။ မဖြစ်တာတွေက များပါတယ်၊
အဲဒီမဖြစ်တာတွေက အစိုးရသစ်တခုဆိုတာကို အက်(ဖ)ဘီအီးတို့က သဘောတူတာလား၊
ဒါမှမဟုတ် မဖြစ်တာ ဖြစ်တာထားလို့ နောက်အသစ်လေးတခုပါလား၊
အက်(ဖ)ဘီအီးတို့ ဆုံးဖြတ်ချက်အရဆိုရင်တော့ အစိုးရ်အင်္ဂါရပ်တခုနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ အစိုးရသစ်တခု ဖွဲ့ဖို့ပါပဲ။
ဒီလိုအတွေးအခေါ်သည် ကြိုဆိုထိုက်လှပါသည်။ “ အစိုးရအင်္ဂါရပ်နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့အစိုးရသစ် ” ဖွဲ့ရန်တဲ့..။
ဒီအဆိုကိုတင်သွင်းတာ မည်သူမည်ဝါလို့ သိခွင့်မရှိပေမယ့် အဆိုသွင်းသူကို ဂုဏ်ပြုရမှာပဲ ဖြစ်သလို အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက် သဘောတူသူများကိုလည်း လေးစားလောက် စရာပါ။ သို့သော်…
ယခု ၂၀၁၁ ခုမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ တနှစ်ကာလရှိလာပါပြီ၊
ယှဉ်ပြိုင်အစိုးရသစ်ပေါ်ထွန်းရေးကို သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့ အက်(ဖ)ဘီအီးတို့ ဘယ်လောက်ခရီးပေါက်နေကြပြီလဲ၊
ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများက ဘယ်ပုံဘယ်နည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါသလဲ။
အက်(ဖ)ဘီအီးတို့ သေသေချာချာ ရှင်းလင်းတင်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် အစိုးရသစ်၏ ရှိရမည့်အင်္ဂါရပ်များဆိုတာ ဘာပါလဲ၊
၎င်း အင်္ဂါရပ်များနှင့်ပြည့်စုံရန် အခြေခံလိုအပ်ချပ်များက ဘာပါလဲ၊
အဲဒီအခြေခံလိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံရန် လုပ်ဆောင်ရမည့် ပဏာမလုပ်ငန်းများက ဘာပါလဲ၊
အဲဒါတွေအားလုံးသည် လက်တွေ့ကျကျဖြစ်နိုင်မှုအပေါ်မှာ အာမခံနိုင်သည့် စကားများဖြင့် ပရိတ်သတ်ကို ရှင်းလင်းဖို့ လိုပါတယ်။
“ ငါ့စကားနွားရ- ငါတို့က ဒေါ်လာရ ” ဆိုတဲ့ စကားမျိုး မဖြစ်သင့်ပါ။ တန်ဖိုးရှိသူတိုင်း “ ဆိုခဲစေ၊ မြဲစေ ” ဆိုတာ နားလည်ကြပါတယ်။
အင်္ဂါရပ်ပြည့်စုံတဲ့ ယှဉ်ပြိုင်အစိုးရသစ်တခုဆိုတာ မြန်မာလူထုအတွက် မုချလိုအပ်ချက်ပါ။
ဒီလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့် စီမံချက်ကို အက်(ဖ)ဘီအီး အနေနဲ့ ချပြရန်လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီလိုချပြမှလည်း ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ ပူးပေါင်းပါဝင်လာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်များကို နိုင်ငံတကာတရားရုံး (ICC) တွင် တရားစွဲဆိုနိုင်ရေးကိစ္စကို ထောက်ခံ၍ ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များအား လိုအပ်သည့် ကူညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီ (UNSC) မှ မြန်မာပြည်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော ပြစ်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် စေလွတ်နိုင်ရေးအတွက် အက်(ဖ)ဘီအီးမှ လုပ်ဆောင်ရန် ပါတဲ့..။
ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာ နှစ်ပိုင်းတွေ့ရပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်းကတော့ UNSC မှ မြန်မာပြည်တွင်ဖြစ်ပွားနေသော ပြစ်မှုများကို စုံစမ်စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် လွတ်နိုင်ရေးဆိုတာကို လက်ခံထားတာတွေ့ရပြီး၊ US အစိုးရကလည်း မူအရ သဘောတူတဲ့ အဆင့်ရှိတယ်လို့ သိထားပါတယ်။
ဒါတောင် “ စုံစမ်းရေး ” ပါ၊ စစ်ဆေးရေး အဆင့်မဟုတ်သေးပါဘူး၊
မည်သို့ဆိုစေ အက်(ဖ)ဘီအီးက အမှန်ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဆိုလျှင် ထောက်ခံရမှာပါပဲ။
US က သဘောတူတဲ့အဆင့်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်လည်း အက်(ဖ)ဘီအီးတို့ အတွက် မျှော်လင့်ချက် ပိုးစုန်းကြူးလေး တကောင်ပါပဲ။
ဆုံးဖြတ်ချက်နံပါတ်လေးရဲ့ ပထမပိုင်းမှာ စစ်အုပ်စုကို ICC တင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များအား ကူညီပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြရန် လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအစ်ရှုးကလည်း အလုပ်ပြဖို့ အစ်ရှုးတခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ပရီပိုဇယ်တောင်းတဲ့နေရာမှာလည်း မျက်နှာပန်းလှပါတယ်။
ရေဒီယိုမှာလည်း မကြာမကြာကြားရတဲ့သတင်းပါ။ အောင်ထူးတို့အဖွဲ့က အဓိကအချက်အလက်စုဆောင်းပြီး အစ်ရှုးကျအောင်ကြိုးစားကြတာပါ၊
ICC ကို စစ်အုပ်စု ရောက် မရောက်တော့ မသိဘူး၊ မကြာခင်က ဗိုလ်ဉာဏ်ဝင်း(နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး) တယောက် US ကိုရောက်၊ ဝါရှင်တန်ကို ရောက်နဲ့ အဆင်ချော နေသလို၊ ဗိုလ်သိန်းစိန်လဲ US မှာ မိန့်မိန့်ကြီး မိန့်ခွန်းတွေ ပြောခဲ့ပါတယ်၊
ဟော အခုလည်း ဝီကီလိအဆိုအရ ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့ US အကြားအထူးဆက်သွယ်ရေး အရာရှိတောင် ထားရှိတော့မယ် ဆိုပါလား။
မည်သို့ဆိုစေ အက်(ဖ)ဘီအီးတို့ရဲ့ ကိုမောင်မောင်နဲ့ အောင်ထူးတို့ လုပ်ရပ်တွေအပေါ်မှာထားတဲ့ စေတနာကို မှတ်တမ်းပြုရမှာပါပဲ။
ဆုံးဖြတ်ချက် နံပါတ် ငါး။
န.အ.ဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ ပြစ်မှုကြီးများ ကျူးလွန်ပြီးနောက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရနေမှုများ အဆုံးသတ် စေရေး နိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှု (Ending Impunity Burma campaing) ကို ဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားရန်…. တဲ့။
န.အ.ဖ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများသည် မည်ကဲ့သို့သော ပြစ်မှုကြီးများကို ကျူးလွန်ထားပါသည်ဟု နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ တရားရုံးတခုခုက စစ်ဆေးတွေ့ရှိအတည်ပြု ဆုံးဖြတ် ထားပါသလဲ။
ထိုကဲ့သို့ ပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီး ထိုက်တန်သည့် အရေးယူမှုပြုလုပ်ရန် အဆင့်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုသော်၊ အရေးမယူနိုင်သေးသည့် ကြားကာလကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာမှုရနေသည်ဟု ဆိုပါသည်၊
ပထမအဆင့် မသေချာဘဲ ဒုတိယကောက်ချက်ဖြစ်သည့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာမှု ရနေသည်ဟု မည်သူက တတ်အပ်ပြောနိုင်ပါသနည်း၊
ဒါကို အက်(ဖ)ဘီအီးတို့အရင်ဖြေကြည့်ပါ၊ န.အ.ဖ ဗိုလ်ချုပ်တို့ကျူးလွန်ထားသည့် ပြစ်မှု့ကြီးများအတွက် အမှန်တကယ် ထိထိေ ရာက်ရောက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် နိုင်ငံတကာခုံရုံးတခုခုမှ ပြစ်မှု့ထင်ရှားကြောင်းနှင့် မည်သို့အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း တိကျသည့် ထုတ်ပြန်ချက်တို့ စာတို့ရှိထားပြီးဖြစ်လျှင် ယ္ခု အက်((ဖ်)ဘီအီးရဲ့ ကင်ပိန်း အစ်ရှုးကိုထောက်ခံပါသည်၊
ပရိတ်သတ်ကလည်း ထောက်ခံကြမည် အမှန်ဖြစ်ပါသည်၊
သို့မဟုတ်ဘဲ ပရီပိုဇယ် အစ်ရှုးလောက်ဆိုရင်တော့ ပြည်သူလူထုရဲ့ခေါင်းကို ကလိန်ခြုံ သံတင်းပုတ်နဲ့ ခဏခဏ အထုခံနေရသလိုပင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။
စစ်အာဏာရှင်စံနစ်တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုအခြေခံ၍ ပြည်တွင်း၊ နယ်စပ်နှင့် နိုင်ငံတကာအင်အားစုများကိုယ်စားပြုပါဝင်ခွင့်ရစေမည့် ကွန်ဂရက် တရပ်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်တဲ့။
ဒီကိစ္စသည်လည်း အမှန်တကယ်လိုအပ်လှပါသည်၊ ပြည်တွင်း၊ နယ်စပ်နှင့် နိုင်ငံတကာ အင်အားစုများဆိုတာ အမှန်တကယ် တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းအဖြေရှာကြဖို့လိုပါသည်၊
သို့သော် အမှန်တကယ် ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး စစ်မှန်သည့် ကွန်ဂရက်ဆိုတာ ပြည်ပမှာ ဘယ်တုံးကမှ မရှိခဲ့ဘူးပါ။
ကိုယ့်လူနှင့်ကိုယ် လက်ဝါးရိုက်ပြီး မှတ်တမ်းမဲ့လက်ဝါးကြီးအုပ်ဆွေးနွေးပွဲများ၊ ကြိတ်ဝိုင်းများသာ အများဆုံး ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်၊
ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်နေရာမှာမဆို ဆွေးနွေးပွဲတွေပဲလုပ်လုပ် ရေဒီယိုမီဒီယာမှာရှိနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ တွင်တွင်ကြီး ကြေငြာပေးကြပါသည်။
ပြည်ပဆွေးနွေးပွဲများသည် ဘယ်လိုပင်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ပေမင့် အဖြေမထွက်၊ အကောင်အထည် မပေါ်တာကတော့ ထုံးစံပါပဲ၊
သို့ပေမယ့် ကြေငြာထားတဲ့ ရေဒီယိုဝိုင်းတော်သားတွေကတော့ သတင်းလဲရ ထမင်းလဲဝကြပါတယ်၊
ကာယကံရှင်တွေကလည်း ရေဒီယိုပါပြီဆိုမှတော့ ပရီပိုဇယ်ကသေချာသလောက်ပါပဲ
၊ ဒါတွေလည်း ပြည်သူအားလုံးမသိချင်အဆုံးပါ၊
ဒါကြောင့် မျောက်ပြဆန်တောင်းတွေလို့ အပြောခံနေကြရတာပဲ မဟုတ်ပါလား။
မြန်မာလူမျိုးတွေကို အရှက်အကြောက်ရှိတဲ့ လူမျိုးတွေလို့ ကမ္ဘာကထင်နေတာ မှားများမှားနေကြပြီလား၊
အက်(ဖ်)ဘီအီးကလည်း ပြည်တွင်း၊ နယ်စပ်၊ ပြည်ပတို့အတွက် ကွန်ဂရက်ကြီးဖြစ်ဖို့ ပူးပေါင်းအုံးမယ်ဆိုတော့ ဘယ်လူတွေကို ဘယ်ပုံစံဘယ်မူနဲ့ ဖိတ်ကြားကြမှာလဲ၊
အစ်ရှုးကြီးက ကြီးလိုက်တာ။ ယူနီကယ်က လျှော်ကြေးငွေတွေအကုန်ထုတ်သုံးမလို့လားလို့ ထင်စရာဖြစ်နေပါပြီ၊ ဒါမှမဟုတ် ခတ်မြက်မြက်ကလေးတပွဲများလား။ … ။
ငါရယ် ငါ့ယောက်ဖတွေရယ် ကြောင်မရယ် ပြီးတော့ ဟိုဆွံအ နားမကြားကျောင်းက ကျောင်းသားတွေရယ်၊ ဒါဆိုလုံလောက်ပြီဆိုတဲ့ ကွန်ဂရက်မျိုးလား၊
အဲဒီလိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲ အမှန်တကယ် ပွင့်လင်းတဲ့ဖိတ်ကြားမှု့မျိုး၊ အစည်းအဝေးသည်ဘာကြောင့်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်မှု့၊ လက်တွေ့ကျတဲ့ ရလာဒ် ကောင်းတွေဘယ်လိုထွက်ပေါ်လာနှိုင်မယ်ဆိုတဲ့ အာမခံချက်၊ ဒီမိုကရေစီနည်းကျအစည်းအဝေးမျိုး၊ ဒီလိုအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ ညီညွှတ်တဲ့ ကွန်ဂရက်မျိုးဆိုရင်တော့ အားပေးထိုက်ပါတတယ်၊ အက်(ဖ်)ဘီအီးတို့ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ။ ။…။
အဲ့ဒီ့မှာပြဿနာရှိတယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး မဝင်ရေးကိစ္စနဲ့ပဲ ဦးဟံရောင်ဝေနဲ့ ကွဲခဲ့ကြပြီ၊ ယ္ခု အက်(ဖ်)ဘီအီးသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးဝင်းတင်(စု၊တင်) တို့မူပေါ်မှာပဲ အသေရပ်နေကြပြီလားလို့ မေးစရာရှိတယ်၊
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးဝင်းတင်တို့ရဲ့ အင်အယ်ဒီသည် တရားမဝင် ဘဝကို ရောက်နေပါပြီ၊
ဒါကြောင့် သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း တရားဝင်ရေးအတွက် ဥပဒေလမ်းကြောင်းအရ ကြိုးစားနေရရှာပါသည်။ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ပါ၊
ဒါကြောင့် လွှတ်တော်ပ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကိုသာ လုပ်နေကြရပါသည်၊
ပြည်သူ့ယုံကြည်အားထားမှု့ကို ဘယ်လောက် ရေရှည်ထိမ်းနိုင် မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြရ ပါတော့မည်။
အင်အယ်ဒီ၏ ယ္ခုစွဲကိုင်ထားသည့် မူနှင့် မြန်မာပြည်ကို ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်အောင်လုပ်ကိုလုပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ယုံကြည်သူတွေလည်း အများပြားရှိကြပါသည်၊
ဒါက ယုံကြည်ချက်မို့ဘာမှပြောလို့မရနိုင်ပါ။ ။…။
မြန်မာရာဇဝင်ထဲက ပညာရှိအမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦးသည်ပင်လျှင် ဆင်မဲကို နောင်အနှစ်လေးဆယ်မှာ ဧကန်ဖြူလာပါမည်ဟု ဘိုးတော်ဘုရားကိုလျှောက်ဘူးပါသည်၊
ဘိုးတော်က အမှန်လားဟဲ့လို့မေးတော့ ယုံကြည်ပါတယ်ဘုရား၊ ယုံကြည်ပါတယ်ဘုရားဟု လျှောက်ထားပါသည်၊
နောက်အခြားအမတ်တွေက ဟုတ်ပါ့မလား ဦးပေါ်ဦးရဲ့လို့မေးတော့ … ဦးပေါ်ဦးက နောက်နှစ်လေးဆယ် ဆိုရင်လည်းကွာ ငါသေရင်သေ၊ ငါမသေလည်း ရှင်ဘုရင်နဲ့ ဆင် တဦးဦးသေမှာပေါ့ကွာလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်တဲ့၊ ယုံကြည်ချက်ပါပဲ။
ကမ္ဘာ့ကွန်မြူနစ်ရော ဗ.က.ပတွေပါ ယနေ့တိုင် သူတို့ဝါဒကို ယုံကြည်နေကြတုံးပဲ မဟုတ်ပါလား၊ အက်(ဖ်)ဘီအီးတို့အနေနဲ့ စု၊တင် ဒီချုပ်ကို ဝိုင်းရံမှု့အပေါ်ဘယ်လိုမှမမြင်ပါ၊
သို့သော် ပြည်ပရောက်အင်အယ်ဒီအမတ်များကို ဒေါ်စုက တရားဝင်ရော တရားမဝင်ရော စိတ်ထဲကပါ အသိအမှတ်ပြု နေသေးပါ သလားဆိုတာ အသေအချာ သိပါသလား၊
ဦးလွင်ကတော့ အင်အယ်ဒီအယ်အေတွေကို မသိဘူးလို့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ပြည်ပမှာ ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်တော့ အလုပ်ဖြစ်ကြတာပါပဲ။ ။…။
နံပါတ်ရှစ်ကတော့ ဒီချုပ်ကို တိုက်တွန်းထားတာမှို့အရေးမပါတော့ပါ၊ ။…။
ဦးဝင်းတင်သဝဏ်လွှာကိုမှတ်တမ်းတင်ကြောင်းနှင့် ညီလာခံ၏ လမ်းညွှန်အဖြစ် ခံယူကြောင်းပါတဲ့။
ဦးဝင်းတင်နှင့် ဒေါ်စုတို့၏ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးမူကိုတော့ နိုင်ငံရေးသမားတိုင်းအလွတ်ရနေကြပါပြီ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး မဟာဗျူဟာ တွေကို အကြမ်းမဖက်အနုနည်းနဲ့ အကောင်အထည်ဖေါ်မယ့် လမ်းစဉ်ပါပဲ၊
ဟိုတုံးကလည်း ဒါပါပဲ၊ အခုလည်း ဒါပါပဲ မပြောင်းလဲပါဘူး၊ ဒါကြောင့်ဟိုတုံးကလည်း မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး အခုထိလည်းမအောင်မြင်ဘူး၊
တရားမဝင်ပါတီအဖြစ်လျှော့ကျခဲ့တာသာတွေ့ရပါတယ်။ (စု၊တင်)မူရဲ့ အမြင့်ဆုံးအပိုင်းက လူထုကို လမ်းပေါ်ဆွဲတင်တာပါပဲ၊
ဒီနည်းသည် အဆုံးအရှုံးနည်းပြီး သိမ်မွေ့တဲ့နည်းပါ၊
ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံလို တိုင်းပြည်မှာ တိုက်ပွဲရဲ့ အဆုံးသတ် အနိုင်ယူမည့်အဆင့်ကို လူထုကိုယ်တိုင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိမရှိ အကဲဖြတ်မှန်ဖို့လိုပါတယ်၊
ဒါဟာ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့တာဝန်ပါ၊ အကဲဖြတ်မှားရင် ဘယ်လိုမှ မအောင်ပါဘူး၊ အခုလည်း ဒါကြောင့်မအောင်တာပါ၊
မအောင်တဲ့အခါမှာလည်း လူထုခေါင်းပေါ်ပဲ ပုံချတတ်ကြပါတယ်၊
ဒီနေရာမှာ လူထုတိုက်ပွဲသည် အဆုံးသတ်အနိုင်ယူနိုင်သည့် အခြေအနေမရှိလျှင် ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ အဆုံးသတ်အနိုင်ယူမယ်ဆိုတာ တခါတည်း စဉ်းစားဆုံးဖြတ် စီစဉ်ပြီးသား ရှိကိုရှိရမယ်၊ ကိုယ်တိုက်မယ့် စစ်အစိုးရသည် တဖွဲ့တည်းမဟုတ် သူ့နောက်က ဘီလူးတွေကိုပါ ကြည့်တတ်ရမယ်၊
အစွန်းရောက် သံချေးတက်အတွေးအခေါ်ရှင်များအတွက်တော့ ဒီစကားတွေသည် မိချောင်းမင်းရေကင်းပြနေသလိုဖြစ်မှာပါပဲ၊
ဒါပေမယ့် အမှန်တွေပါ၊ ဒီထက်လက်တွေ့ကျတဲ့ အမှန်တရားကတော့ မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုဆက်ဆံမယ့် စစ်ဦးစီးအစိုးရသစ် တရပ် မုချပေါ်ထွန်း လာပါပြီ။
ယ္ခု အက်(ဖ်)ဘီအီးတို့ အစည်းအဝေးလုပ်မယ့် နော်ဝေနိုင်ငံကတောင် ရေနံတွေ သွားတူး တော့မယ်တဲ့။…။
ပြည်ပရောက် အက်(ဖ်)ဘီအီးတို့ကတော့ ဘယ်လိုယုံကြည်ချက်တွေရှိပြီး ပြည်တွင်းက စု၊ တင် ဒီချုပ်ရဲ့ မူအတိုင်း ဦးဝင်းတင်ရဲ့ သဝဏ်လွှာကို လမ်းညွှန်အဖြစ် ခံယူကြမယ် ဆိုတော့လည်း ခံယူကြပေါ့၊
ပရိတ်သတ်ကတော့ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ကြည့်နေရသလိုပါပဲ။ ။…။
နော်ဝေမှာ ကျင်းပမယ်တဲ့ …ကောင်းပါတယ်၊ နိုင်ငံတွေလှည့်ပြီး ကျင်းပတော့ ရောက်ဖူးကြတာပေါ့၊
ပြီးတော့ ကိုယ့်စားရိတ်နဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ တိုင်းပြည်အပေါ်စေတနာထားရာလည်းကျတာပေါ့။ ။….။
ဆုံးဖြတ်ချက် နံပါတ် တစ်ဆယ့်တစ်
ဆုံးဖြတ်ချက် နံပါတ် တစ်ဆယ့်တစ်ကတော့ စာရွက်မှာပါကိုပါမလာပါဘူး။
ဘာတွေများအထူးဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ပါနေလို့ လုံးဝထည့်သွင်း မဖော်ပြကြတာလဲ… ပါကို မလာဘူး၊ အိမ်က ကွန်ပြူတာပဲမကောင်းလို့ဘဲ မတွေ့တာလားတော့ မသိပါဘူးဗျာ။ ။…။
ဆုံးဖြတ်ချက် နံပါတ် ဆယ့်နှစ်။
ယူကေက ဒေါက်တာဝင်းနိုင်နဲ့ ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ဝင်းနွယ်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံး ပါဝင်ကြလို့ အားရစရာကောင်းပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ် ဆယ့်သုံး။
အလုပ်အဖွဲ့မှ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းပါတဲ့။
ပြည်ပရောက်အဖွဲ့တွေထဲမှာ အဲဒီလိုမော်ဒယ်ပုံစံနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးပိုင်းကို ကိုင်တွယ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်၊
အဲဒီလို ယျေဘူယဆန်တဲ့စာကြောင်းလေးသည် သူအကျိုးပြုချင်တဲ့လူကိုု အလွန်အကျိုးရှိစေပါတယ်တဲ့၊
ဒီလိုစာကြောင်းမျိုးကိုရေးရန် အိုင်ဒီယာရှင်သည် အလွန်ပညာကြီးသူလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊
အခြေခံဖြစ်တဲ့ ငွေထိမ်း၊ စာရင်းစစ်၊ ရသုံးစာရင်း၊ အတည်ပြု ချပြဆိုတာတွေဘာမှလုပ်စရာမလိုအောင် ရှင်းလှပါတယ်၊
ဒီတော့လည်း ဗွီအိုအေမှာ ကိုမောင်မောင်တခါကပြောသလိုပေါ့၊
”ငွေပေးတဲ့ အဖွဲ့ဆိုတာ တကယ့်ထိပ်တန်းအဖွဲ့အစည်းတွေပဲ၊ သူတို့ အော့တစ်နဲ့ သူတို့ ရှိပြီးသားပါ၊
မယုံရင်ဘယ်ပေးမလဲ“တဲ့၊ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့အဖွဲ့ဆိုတာ လူထုကိုပြပြီး ငွေတောင်းကြတာ ချည်းပါပဲ၊
ပေးတဲ့လူနဲ့ ယူတဲ့လူ ကျေနပ်ယုံကြည်မှုသာ အဓိကဆိုရင် ရ/သုံး ငွေကိစ္စသည် မိမိတို့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ဘာမျှမဆိုင်ဆိုတာမျိုးပဲဖြစ်နေပါတော့သည်၊
အခုလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ၊ ဒါကြောင့် ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ရဲ့နောက်ပိုင်း မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ပြည်ပသမိုင်းကို ရေးပါဆိုလျှင် အင်းဝခေတ်က ငတက်ပြား သမိုင်းကို ကော်ပီကူးချ လိုက်ရုံပါပဲ၊
ငတက်ပြားကမှ ဘုရင့်ဘဏ္ဍာတိုက်ဖေါက်ပြီး ပြည်သူတွေကိုဝေသေးတယ်၊
အခုဟာက အင်ဂျီအိုဆီက အကြွင်းအကျန်ယူပြီး လုပ်ငန်းပြရုံသုံးပြီး ကျန်တာတော့ ပြည်သူတွေအတွက် စုထားကြတာလည်းဖြစ်နှိုင်ပါတယ်၊ သာဓုခေါ်စရာပါ။
အခုလည်း အက်(ဖ်)ဘီအီးအဖွဲ့က ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စကို အဖွဲ့ဝင်အားလုံးဝိုင်းပြီးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ လူက ဆယ့်ရှစ်ယောက် ကြီးများဆိုတော့ လည်း တယောက်နဲ့တယောက် ဘယ်လိမ်ကြပါ့မလဲ၊ သာဓုခေါ်စရာပါ။ ။…။
ဆုံးဖြတ်ချက်လေး၊ ငါး၊ခြောက်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ရန် လေးဦးဂိုဏ်းကို တာဝန်ပေးပါတယ်။
အဲဒီအထဲမှာ ကိုအောင်ထူးလည်းပါနေတော့ သူကအဖွဲ့ဝင်စာရင်းမှာလည်းမတွေ့ရပါဘူး၊
ပြီးတော့ ဆွီဒင်နိုင်ငံသားလား၊ ဩစတေးလျှနိုင်ငံသားလား ဘယ်ကလည်းဆိုတာတော့ သိစရာမလိုကြပါဘူး၊
ဒါပေမယ့် သူ့ကိုဘယ်ပုံစံနဲ့ မစ်ရှင်အဖွဲ့မှာ ထည့်ထားတယ်ဆိုတာ နားမလည်ပါ၊
သို့သော်ပြည်ပမှာဘယ်ပုံစံနဲ့ပဲသွားသွား လူညီရင် ဤကိုကျွဲလို့ဖတ်နိုင်တယ်၊
လူမညီလည်း ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ ပေးသူနဲ့ယူသူ ကျေနပ်ရင်ပြီးတယ် ကြားဝင်ဖို့ကမလွယ်ဘူး၊
ဒီတော့ ဥပဒေသမား ကိုအောင်ထူးပါနေတာလည်း သိပ်တော့မဆန်းပါဘူး။
ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတော့ပြီးပါပြီ၊ မှတ်တမ်းတင်ကဏ္ဍမှာ ဦးကျော်သွင် (ခရမ်းအမတ်)လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ငါးကုမ္ပဏီမှ အမြတ်ငွေ ၁၀%ကို အက်(ဖ်)ဘီအီး မစ်ရှင်အဖွဲ့အားလှူဒါန်းသည်တဲ့။
လှူဒါန်းတာက အက်(ဖ်)ဘီအီးကိုမဟုတ်ဘူး၊ မစ်ရှင် လေးယောက်ကိုပဲ လှူတာပါ၊
မည်သို့ဆိုစေ ငွေအမောင့်လောက်တော့ ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်၊ အတိအကျမဟုတ်တောင် ခန့်မှန်းပေါ့၊
သို့သော်လည်း အက်(ဖ်)ဘီအီးအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ အတိအကျသိကြမှာပါ၊ မည်သို့မည်ပုံ သုံးစွဲ ကုန်ကျသည်၊
ရ သုံး ကျန် ဆိုတာတွေလည်း တိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်သိကြမှာပါ၊
အခု ဆယ့်ခြောက်ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှာပြောနှိုင်ကြေငြာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ အက်(ဖ်)ဘီအီး တိုးတက်ပါစေ။
﻿ နအဖ၏ အစိုးရသစ် ကို ယှဉ်ပြိုင်စိန်ခေါ်နိုင်သော အစိုးရ သစ်ဆိုတာ
မာတလိ -19,Jan, 2011။-
﻿ (၁၆) ကြိမ်မြောက် ဥရောပရောက် မြန်မာ့ အရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကို နော်ဝေနို်င်ငံ ။အော်စလိုမြို့– မှာ ၁၂(ပြည်ထောင် စုနေ ့။ ၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ လ ၂၀၁၁ ခုနှစ်။ (စနေ၊ တနင်္ဂနွေ) တွေမှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်တော့မယ်လို့ သိရပါတယ်
လုပ်လာခဲ့တာ ၁၆ ကြိမ် အထိ ရှိလာပြီ ဆိုတော့ လည်း မြန်မာ့ ရှေ ့ရေးကို ဘယ်လို နည်းနာတွေနဲ့ ကယ်တင်ဖို့ တွေ ့ဆုံ ညှိုနှိုင်းပြောဆို ဆုံးဖြတ်ကြမယ် ဆိုတာကို မြန်မာ ပြည်သားတိုင်း သိချင်ကြမှာပါ။
(၁၅) ကြိမ်မြောက် ဥရောပရောက် မြန်မာ့ အရေး ဆွေးနွေးပွဲ မှာတုန်းကတော့ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများထဲက ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များ အကောင်အထည် ဖော်ရေးအတွက် ခေါင်းဆောင်များ ရွေးချယ်လိုက်ကြပါသတဲ့။
သူ ့မူရင်း စာသားမှာတော့ အချက်အမှတ် ၁၂ မှာ —
(၁၅) ကြိမ်မြောက် ဥရောပရောက်မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးပွဲမှ ချမှတ်သည့် ရှေ ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖေါ်ဆောင်နိုင်ရန် အောက်ပါ အလုပ်အဖွဲ ့ကို ဖွဲ ့စည်းကြောင်း ဆုံးဖြတ် သည်၊
၁၊ နိုင်ထောဦး (ဒိန်းမတ်)
၂၊ မခင်မိုးမိုး (ဒိန်းမတ်)
၃၊ ဒေါက်တာ ဝင်းနိုင် – ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်ဝင်းနွယ် (ယူကေ)
၄၊ ကိုမင်းဟိန်း (ယူကေ)
၅၊ ကိုထွေး (ပြင်သစ်)
၆၊ ကိုထင်ကျော် (ပြင်သစ်)
၇၊ ဦးကျော်သွင် (နော်ဝေ)
၈၊ ကိုသက်ထွန်းဦး (နော်ဝေ)
၉၊ Jonathan Thang (နော်ဝေ)
၁၀၊ ဦးသောင်းထွေး (နယ်သာလန်)
၁၁၊ ကိုနိုင်ဝင်း (နယ်သာလန်)
၁၂၊ ဦးနွယ်အောင် (ဂျာမဏီ)
၁၃၊ ကိုဆန်နီ အောင်သန်းဦး (ဂျာမဏီ)
၁၄၊ ကိုဌေးဇေယျာ (ဆွီဒင်)
၁၅၊ မအနူး (ဆွီဒင်)
၁၆၊ ဒေါက်တာ သန်းထိုက် (ပိုလန်)
၁၇၊ နော်အငယ်မ KSC (ဆွီဒင်) ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလူတွေထဲမှာ အဓိက အရေးကြီး အထင်ကရ လူကြီးများတော့
(FBE) မစ်ရှင်အဖွဲ ့ကို ဖွဲ ့စည်း တာဝန်ပေးအပ် ခြင်းခံရတဲ့
(၁) ဦးအောင်ထူး ( မြန်မာ နို်င်ငံ ရှေ ့နေများ ကောင်စီ)
(၂) ဒေါက်တာဝင်းနိုင် (အင်္ဂလန်)
(၃) ဦးနွယ်အောင် (ဂျာမဏီ)
(၄) ဦးကျော်သွင် (၁၉၉ဝ ခုနှစ်ရွေးကောက်ခံ အနိုင်ရ ခရမ်းပြည်သူ ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်)
တို့ဖြစ်တာ တွေ ့ရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲ တိုးတက်အောင်မြင်ရေး အတွက် ဆုံးဖြတ် ညှိုနှိုင်းကြရာ တွေမှာ အဲဒီအထဲ ကျွန်ုပ် စိတ်အဝင်စားဆုံး အချက်ကို ရှာကြည့်မိပါတယ်။
(၁၅) ကြိမ်မြောက် ဥရောပရောက် မြန်မာ့ အရေး ဆွေးနွေးပွဲ ကို (Gävle, Sweden) မှာ 31th Jul / 1st Aug 2010 လုပ်ခဲ ့ရာမှာ။ ထူးထူးခြားခြား ရှေ ့လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခြင်း၊ ဆိုတဲ့ အချက်မှာ တော့
အချက် အမှတ် နံပါတ် ၃၊မှာ နအဖစစ်အာဏာရှင် အစိုးရအား လည်းကောင်း။
၂၀၀၈ ဖွဲ ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မူတည်ှု ပေါ်ပေါက်လာမည့် အစိုးရသစ်အားလည်းကောင်း
ယှဉ်ပြိုင်စိန်ခေါ်နိုင်သော အစိုးရအဂါင်္ရပ်များနှင့် ပြည့်စုံသည့် ယှဉ်ပြိုင်အစိုးရ တစ်ရပ် ပေါ်ထွန်း လာရေး —
အတွက် သဘောတူကြောင်းနှင့် ပြည်ပရောက်မြန်မာပြည်သားများနှင့် ဒီမိုကရေစီအင်အား စုများမှ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ဆုံးဖြတ်သည်၊
ဒီစားသားထဲက နအဖစစ်အာဏာရှင် အစိုးရအား လည်းကောင်း။ ၂၀၀၈ ဖွဲ ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မူတည်ှု ပေါ်ပေါက်လာမည့် အစိုးရသစ်အားလည်းကောင်း ယှဉ်ပြိုင်စိန်ခေါ်နိုင်သော အစိုးရအဂါင်္ရပ်များနှင့် ပြည့်စုံသည့် ယှဉ်ပြိုင်အစိုးရ တစ်ရပ် ပေါ်ထွန်း လာရေးအတွက် သဘောတူကြောင်း အတိုင်းဆိုရင်
(၄) ဦးကျော်သွင်( နော်ဝေ)
တို့က လက်ရှိ ဒေါက်တာ စိန်ဝင်း စင်ပြိုင်အစိုးရက ကာလကြာမြင့်လာလို့ အသိအမှတ် မပြု ချင်တော့တာလား၊
အင်သစ် အားသစ်နဲ့ ပေါ်ပေါက်လာမယ့် နောက်အစိုးရသစ်ကို လိုချင်တာလား
ဆိုတာ မေးစရာ မလိုတဲ့ အချက် အဖြစ် တွေ ့ရပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ အဲလိုတွေ ရပေမယ့် သူတို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချအပြီး ၈-လအကြာမှာဦးမြင့်သိန်း (အင်စီယူဘီ)နဲ့ ဗကပ- ဦးဖိုးသံချောင်း တို့ရဲ့ (မဇ္ဈိမ)သတင်းဌာနမှာ တနင်္လာနေ့၊ ဩဂုတ်လ ၂၃ ရက် ၂၀၁ဝ ခုနှစ် ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန် ကြေငြာ လိုက်တဲ့ “ရွေးကောက်ပွဲလွန် ကာလအတွက် ယာယီအစိုးရ ဖွဲ့စည်းရေး” ဆိုတာ ကို ထောက်ခံသံ မထွက် ဖြစ်နေတာ တွေ ့ရပါတယ်။
ဒီလူတွေ ပြန်ကြည့်ရင် ဦးကျော်သွင်နဲ့ ဒေါက်တာ ဝင်းနိုင်တို့က အင်စီယူဘီ အဖွဲ့ ဒေါက်တိုင်ကြီး ၄ ချောင်း လက်အောက်မှာ ရှိနေတာ တွေ ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးနွယ်အောင်နဲ့ ရှေ ့နေကြီး ဦးအောင်ထူးတို့ကိုလည်း နှယ်နှယ်ရရ မဟုတ်တဲ့ ပညာရှိ ကြီးတွေ ဆိုတော့ ဘာဖြစ်လို့ ဒီအပေါ်မှာ ငြိမ်နေ ရတယ်ဆိုတာ မတွေ းတတ် အောင်ဖြစ်ရပါတယ်။
လက်ရှိ အချိန်မှာ နအဖ စစ်အစိုးရနဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မူတည်ှု ပေါ်ပေါက်လာမည့် အစိုးရသစ် ကို ယှဉ်ပြိုင်စိန်ခေါ်နိုင်သော အစိုးရ အဖွဲ့ လိုအပ်နေတာ အမှန်ပါ။
ဒီတော့ အခု ဖပ်မံ ကျင်းပမယ့် (၁၆) ကြိမ်မြောက် ဥရောပရောက် မြန်မာ့ အရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးမှာရော ဒီအချက်ို ဆက်လက် အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ကြဦး မှာလား။
တကယ်လို့ ဒီအချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဆက်လက် အတည်ပြု ဆုံးဖြတ် ခဲ့ရင် သူတို့ ဆိုလိုချင်တဲ့ နအဖ၏ အစိုးရသစ် ကို ယှဉ်ပြိုင်စိန်ခေါ်နိုင်သော အစိုးရ သစ်ဆိုတာ ဘယ်ဟာကို ရည်ညွှန်းချင်တာပါလဲ။
ဒေါက်တာ စိန်ဝင်းရဲ့ စင်ပြိုင် အစိုးရကို အားသစ်ဖြည့် ထပ်မံ ပြင်ဆင် ဖွဲ ့စည်းချင်တာလား။
တချိန်က ဦးမောင်မောင်( အက်ဖ်တီယူဘီ ) ထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့ အစိုးရသစ်ကို ပြောချင်တာလား။
ဗကပ-ဦးဖိုးသံချောင်နဲ့ ဦးမြင့်သိန်း(အင်စီယူဘီ) တို့ထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့ “ရွေးကောက်ပွဲလွန် ကာလအတွက် ယာယီအစိုးရ ဖွဲ့စည်းရေး” အစိုးရသစ်ကို ပြောချင်တာလား။
ဒါမှ မဟုတ် ဥရောပရောက် မြန်မာ့ အရေးလုပ်ဆောင်သူများအဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြီး နောက်ထပ် လူသစ်တွေနဲ့ ဖွဲ ့ချင်တာလား။
၁၆ ကြိမ်မြောက် ဥရောပရောက် မြန်မာ့ အရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးမှာတော့ ဒီအချက် ထပ်ပါဦးမယ်၊ ဆုံးဖြတ်ရဦးမယ်ဆိုရင် မြန်မာ ပြည်သားအပေါင်း ဝမ်းသာဖို့ ထင်ရှား ကွဲပြားစွာနဲ့ ပြောဆို လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုမှာ အမှန် ဖြစ်ပါတယ်။
တူသာတွဲလုပ်ကြ၊ မတူရင် ခွဲလုပ်ကြ၊ အများကြိုက်မယ့်တော်လှန်ရေး အမည် လှလှလေးတွေပေး၊ အများ လက်ခုပ်တီးမှာလေးတွေကို လေလှိုင်းက ထုတ်လွှင့် ထုတ်လွှင့်ပြောဆို၊ အလှူရှင်ရှာ၊ ဟန်ပြ နို်င်ငံရေး အစုအဖွဲ ့လေးတွေ နဲ့ အစည်းအဝေးတွေ လုပ်ပြလိုက်ကြနဲ ့မူအရ ဆက်လက် ပြောဆိုနေရင်တော့ ရွှေ ပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေးပဲ ဖြစ်နေဦးမှာပါ။
နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းမှအစ အခြား ဘာပဲ လုပ်လုပ် အရေးကြီးတဲ့ အဆိုတခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ —
သဘောတရား မပါသော လက်တွေ ့သည် အကန်း
လက်တွေ့မပါသော သဘော တရားသည် အကျိုးတဲ့။
တရုတ်၊ရုရှား၊ အိန္ဒိယ၊ အာစီယံနဲ့ ယခု အမေရိကန်ကပါ အနီးကပ် ထိတွေ ့ဆက်ဆံရေး မူ ရသည်အထိ ထောက်ခံမှု အရှိန်အဟုန် တွေနဲ့ ရုဒ်မက် ၇- ချက်အတိုင်း ပြေးနေတဲ့ နအဖ စစ်အစိုးရကို လေအားသန်၊ အားလူးဖုတ်ပြီး ခြေတစ်ပေါင်ကျိုး နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နေရတဲ့ ဘဝထဲက ဥရောပရောက် မြန်မာ့ အရေး ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လွတ်မြောက်ဖို့ လိုပါမယ်။
အကြပ်အတည်းဖြစ်နေတဲ့ လက်ရှိ မြန်မာ့အရေးကို (၁၆) ကြိမ်မြောက် ဥရောပရောက် မြန်မာ့ အရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးမှ ကယ်တင် ဆောင်ရွက် နိုင်ကြောင်း ဆုတောင်းနေပါသည်။
ပြည်ပရောက် နို်င်ငံရေး ဒုက္ခသည်
ဆြာခိုင်၊ ကျွန်တော်က နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်တော့ နိုင်ငံရေးအကြောင်း လုံးဝနီးပါး မသိပါဘူး။ ကျွန်တော် တုံးတယ်ဆိုတာ ကြိုတင်ဝန်ခံပါတယ်။ ကျွန်တော်သိချင်တာက ဦးနုရဲ့အဖွဲ့နဲ့ ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည် ပူပေါင်းလိုက်ရင် ယှဉ်ပြိုင်အစိုးရမဖြစ်ဘူးလားခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တွေးတတ်သလို ပြောတာပါ။ ဥပဒေကိစ္စတွေ ကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူး။ ဒီမေးခွန်းဟာ သိပ်ကြောင်လွန်းနေသလား။ ဆိုးဝါးလွန်းတဲ့မေးခွန်းဖြစ်နေရင် သီးခံပါ။
“The end justifies the means” တဲ့..။ အခု .. နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး.. အန်ဒ်းပြီးရင်းအန်ဒ်း..ပြနေတာလေ..။ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်သုံးသပ်ဖို့ အဲဒီ အန်ဒ်းကို ဂျပ်စတစ်မဖိုင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေပုံရပါတယ်.။
ဆိုလိုချင်တာ .. ၁၉၈၈ က ..ဦးနုရဲ့ ကျွန်တော်သာလျှင် တရားဝင်ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်ပါကြောင်းကို ပြောတာ ယူဆပါတယ်။
အဲဒီအချိန်က .. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မရှိသေးဘူး မှတ်မိတယ်..။
အောင်၊စု၊တင် ပဲရှိတာ..။ (ဦးအောင်ကြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦး)
အကြောင်းတခုခုကြောင့် .. ဦးနုရဲ့ တရားဝင်ဥပဒေကြောင်းအရ ..တရားဝင်မှုကို ယူသုံးပြီး … အစိုးရဖွဲ့ဖို့ .. မပူးပေါင်းဖြစ်လိုက်ပါဘူးဆိုပါတော့ ..။
အဲဒီခေတ်က .. လူထုခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အကြီးဆုံးအမှားတခုပေါ့..။
ကြုံလို ့ထပ်ပြောရရင်.. တပ်မတော်ရဲ့ အကြီးဆုံးအမှား ၁ခုကတော့ .. ၈၈ အာဏာသိမ်းပြီးတာနဲ့ .. မဆလအစိုးရထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေ ..ထောင်ထဲတန်းထည့်.. စစ်ခုံရုံးမတင်ပေးလိုက်တာပဲလို့.. ထင်မိတယ်..။
အဲဒီလိုလုပ်ခဲ့ရင် .. လူထုထောက်ခံမှု အကြီးအကျယ်ရသွားမှာပဲ..။( အဲဒီတုံးက ..တပ်မတော်ကြီးခမြာ..အဲဒီလောက် မရဲသေးဘူး တွေးချင်တွေးပေါ့..)
အဲလိုမလုပ်ခဲ့တော့ .တော်လှန်ရေးကောင်စီနဲ့ မဆလရဲ့ ဆိုးမွေတွေအကုန် ပိုက်ဘောကြီးနဲ့ အခုထိမိနေတုံးပဲ..။ သမိုင်းတရားခံဖြစ်နေပါတော့တယ်..။
သူတို့ နောက်အမှားတခုကတော့ .. ၁၉၉ဝ မှာရွေးကောက်ပွဲတခု ချက်ချင်းလုပ်ပေးလိုက်တာပဲ..။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၁၉၈၈ တုန်းက ကျွန်တော် ၁၂နှစ်သားရှိသေးလို့ ဘာမှ ကောင်းကောင်းမမှတ်မိလိုက်ဘူး။ ဦးနုက ကြေငြာချက်ထုတ်တော့ နိုင်ငံပေါင်း ၄၃လား ၄ရလား မသိ၊ ထောက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာပဲ မှတ်မိတယ်။ ခုမှပဲရှင်းသွားတော့တယ်။
လေးဆယ်မှ ဘဝစတာတဲ့ .. ဟိဟိ
၁၉၈၈၊၁၉၈၉၊၁၉၉၀၊၁၉၉၁ အဲဒီနှစ်များဆီက နှစ်ဖက်စလုံးမှားခဲ့သမျှ(အမှားအကြီးကြီးတွေ) ကို အခု အနှစ် နှစ်ဆယ် ပြန်အဖတ်ဆယ်သောလည်း တိုင်းပြည်ကတော့ မျောသွားပါပြီ။
လူဆိုးလက်သစ် အမှားအသစ်တွေပေးမယ့်သူတွေလည်း စင်ပေါ်ထပ်တက်လာပါပြီ။